असाधारण उपलब्धिहरू छन्, हीनग्रन्थी पालेर किन बस्नु ? « Naya Page
असाधारण उपलब्धिहरू छन्, हीनग्रन्थी पालेर किन बस्नु ?
प्रकाशित मिति :5June, 2018 8:03 pm
आज संसदको दोस्रो अधिवेशनको लगभग–लगभग प्रारम्भिक चरणकै अवस्थामा गरिमाममय संसदको बैठकलाई म एउटा खास विषयमा जानकारी गराउन यहाँ उपस्थित भएको छु । सभामुख महोदय, मेरो निमन्त्रणामा भारतका प्रधानमन्त्री सम्माननीय नरेन्द्र मोदीजी वैशाख २८ र २९ मा नेपालको राजकीय भ्रमण गरेर स्वदेश फर्कनु भएको छ । हामी सबैमा सबै कुराहरू जानकारीमा छँदैनै छन् किनभने आजको सञ्चार सुविधा र पहुँचको सहजताको समयमा सबै कुरा पारदर्शी छन् । तैपनि कतिपय कुराहरूको सन्र्दभमा जानकारी नभएको हुन सक्दछ, अन्योल र अस्पष्टता रहन सक्छन् । एउटा छिमेकी देश, त्यसमा पनि हाम्रा निम्ति सम्बन्धको निकै धेरै महत्व राख्ने देशको कार्यकारीको औपचारिक र राजकीय भ्रमणको सम्बन्धमा यस गरिमामय संसदले औपचारिक रूपमा जानकारी प्राप्त गर्नु जरुरी पनि छ ।
नेपाल र भारत बीचको मैत्रीसम्बन्धलाई एउटा नयाँ उचाइमा पुर्‍याउने कुरा भएको छ । पुराना मान्यताहरू, पुराना तरिकाहरू, पुराना सोचहरूभन्दा पृथक ढङ्गले कुराकानी भएको छ । दुई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्र जो स्वाधीन राष्ट्र हुन्, एक अर्काका आन्तरिक मामिलाहरूमा हुस्तक्षेप नगर्ने, आआफ्ना आन्तरिक मामिलाहरू र वैदेशिक सम्बन्धका मामिलाहरू स्वतन्त्र ढंगले सञ्चालन गर्ने कुरा भएको छ । त्यसै गरेर भौगोलिक अखण्डतालाई सम्मान गर्ने र आपसी हितहरूलाई, राष्ट्रिय हितहरूलाई यथोचित ढंगले सम्मान गर्ने कुराहरू हाम्रा वक्तव्यहरूमा, कुराकानीका क्रममा र हामीले अन्तिममा जारी गरेको सोह्र बुँदे संयुक्त वतव्यमा पनि आएको छ । उहाँले र मैले २८ गते नै संयुक्त प्रेस मिट पनि गर्‍यौँ । त्यसमा पनि थुप्रै कुराहरू आएका छन् ।
दुई देशका कृषिमन्त्रीका तहमा तत्कालै बैठक बसेर के के विषयमा कुनकुन ठाउँमा हामीले कस्तो प्रकारको सहयोग र सहकार्य अगाडि बढाउने हो, त्यसका निम्ति पहिले त ती ठाउँहरू तय हुनु पर्‍यो, विषयहरू तय हुनुपर्‍यो र हाम्रा आवश्यकताअनुसारको कार्ययोजना तय गर्नु पर्‍यो । यी कामहरू मन्त्रीस्तरका बैठकहरूबाट तुरुन्तै गर्ने भन्ने सहमति हामीले गरेका छौँ । काठमाडौँ–रक्सौल रेल–वे निर्माणका लागि प्राविधिकहरूको संयुक्त कार्यदल बनाएर सर्वेक्षण शुरु गर्ने र यस सम्बन्धमा छिटै नै समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने कुरा छ । उहाँहरूको तर्फबाट कार्यदलको रूपमा एउटा डिभिजनलाई जिम्मा दिइसकिएको छ, हाम्रो तर्फबाट कार्यदल निर्माण गरेर पठाउनु पर्नेछ । दुईओटा कार्यदलले तुरुन्तै सर्वेक्षण शुरु गर्छन् र छिटै नै सम्झदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्छन् । यो भारतकै खर्चमा सर्वे र भारतकै खर्चमा, उसैको लगानीमा निर्माण हुने हो । नदीको बाटोबाट जलमार्ग सञ्चालन गर्ने सन्र्दभमा मेरो अघिल्लो भ्रमणमा कुरा जसरी अगाडि बढाइएको थियो, त्यसका लागि प्राविधिकहरूको संयुक्त कार्यदल बनाएर तुरुन्तै सर्वेक्षण शुरु गर्नें सहमति पनि भएको छ ।
हाम्रो देशमा हवाई जहाज पस्ने एउटामात्र रुट छ वीरगञ्ज हुँदै, सिमरा हँदै । कनेक्टिभिटीको समय छ, यस्तोमा एयर इन्ट्री रुट थप चाहिन्छ । यसकारण नेपालगञ्जतिरबाट, भैरहवातिरबाट, विराटनगरतिरबाट इन्ट्री रुटहरू चाहिन्छ । हामीले त्यो माग गर्‍यौँ । दुवै प्रधानमन्त्रीको तहमा थप चारवटा रुट दिनका लागि प्राविधिक पक्षको अध्ययन गर्न निर्देशन भएको छ । उताको टोली र हाम्रो टोलीले तुरुन्तै अध्ययन गर्ने छन् र यो अध्ययनका लागि पनि हामीले आगामी सेप्टेम्बर २२ भन्ने शब्द राखेका छौँ । गम्भीर समस्याका रूपमा उठेको कुरा हो डुवानको समस्या । नेपालको जमिन डुवानमा पर्ने गरेको छ । छिमेक सम्बन्धमा नसुहाउँदो र अनुचित काम भएको छ । अघिल्लो भ्रमणमा पनि मैले कुरा उठाएको थिएँ । मोदीजीको यस भ्रमणमा पनि मैले धेरै गम्भीरताका साथ कुरा उठाएको छु । यो समस्या समाधान हुनुपर्छ । असल छिमेकीपनका लागि यो नीति उपयुक्त छैन । भारतको सिमानामा भारतको आफ्नो बचाउ, आफ्नो बस्तीको बचाउ, आफ्नो खेतीको बचाउका लागि हाम्रो जमिन, हाम्रा बस्ती र हाम्रो खेतीलाई डुवानमा पार्नु वाञ्छनीय हुँदैन । यसको समाधान हुनै पर्छ । अहिले दुवै देश यस समस्याको समाधान गर्न तत्पर भएका छन् । हामी त तत्पर हुने नै भयौँ, हामी त प्रस्तावक हुँदै हौँ । भारत पनि यसमा तयार भएको छ । यो वर्षाभन्दा अगाडिनै सकेसम्म छिटैनै संयुक्त कार्यदल बनाएर, समस्याग्रस्त क्षेत्रको भ्रमण गरेर उपयुक्त निर्णय गर्नुपर्छ ।
हामीले पिक आवर ऊर्जाको आवश्यकता पर्ने समयलाई ध्यान दिएर ऊर्जा बैंकको व्यवस्था गर्ने कुरा पनि गरेका छौँ । भारतलाई एक समयमा बढी चाहिन्छ, हामीलाई अर्को समयमा बढी चाहिन्छ । भारतलाई गर्मी समयमा बढी चाहिन्छ, हामीलाई जाडो समयमा बढी चाहिन्छ । एउटा ऊर्जा बैंकको व्यवस्था गर्ने र ऊर्जाको आपूर्ति र आवश्यकतालाई एडजस्ट गर्ने भन्ने कुराहरू हामीले गरेका छौँ । भारतीयपक्ष यसमा साधारणतया सकारात्मक छ तर यी कुराहरूलाई अगाडि बढाउन बाँकी छ । बुटबल– गोरखपुर ट्रान्समिसन लाइनको सन्र्दभमा हाम्रो ऊर्जा मन्त्रालय लगभग सहमतिको बिन्दु नजिक पुगिसकेको छ । हुलाकी मार्ग हामीले निर्माण गरिरहेका छौँ । जसरी हामीले वीरगञ्जमा बनायौँ त्यसैगरी विराटनगर, भैरहवा, नेपालगञ्जमा इन्ट्रिग्रेटेड चेकपोष्टको व्यवस्था गर्ने कुरा भएको छ । जुट, एलपी ग्यास बुलेट, नेपाली फर्मास्युटिकल आदिका समस्याहरूका सम्बन्धमा हामीले उहाँहरूसँग गम्भीरताका साथ छलफल गरेका छौँ । यस सम्बन्धमा सघन वार्ता अगाडि बढ्दैछन् ।
रोकिएका नोटहरूको सम्बन्धमा अघिल्लो पटक पनि हामीले कुरा उठाएका थियौँ । यसपटक पनि हामीले कुरा उठायौँ तर उहाँहरूले तत् सम्बन्धमा खास जवाफ दिइरहेको स्थिति छैन । हामीलाई लाग्छ यस सम्बन्धमा उहाँहरू गम्भीरतापूर्वक सोचिरहनु भएको छ । यसबारेमा उहाँहरूले सोच्नैपर्छ भनेर हामीहरूले भनिरहेका छौँ । हामीले अरू थप बन्दरगाहहरू हामीलाई आवश्यक पर्छ भनेका छौँ । मेडिकल विद्यार्थीहरू जो एमडी, एमएस अथवा डीएम आदि पढ्ने विद्यार्थीहरूका समस्या पनि उठायौँ । जस्तो उनीहरूको देशका विद्यार्थीले सुविधा पाउँछन् त्यस्तो हाम्रो देशका विद्यार्थीले नपाइरहेको स्थितिमा हामीहरूले कुरा उठाएका छौँ । यसबारेमा उहाँहरूले सकारात्मक जवाफ दिनु भएको छ । अर्को कुरा, भारतको मेडिकल काउन्सिलले दिएको मान्यतालाई हामीले जस्ताको तस्तै स्वीकार्ने तर हाम्रो मेडिकल काउन्सिलले दिएका सटिर्फिकेटलाई र गरेको सर्टिफाइलाई त्यहाँको मेडिकल काउन्सिलले नमान्ने खालको स्थिति जुन छ त्यस्तो हुनुहुँदैन भनेर हामीले कुरा उठाएका छौँ ।
कहिले–कहिले सामूहिक रूपमा हुन नसकेका कुराहरू व्यतिगत तवरमा गर्नुपर्छ । व्यक्तिगत तवरमै ती कुराहरूको समाधान गर्न सकिन्छ । कहिले–कहिले विभिन्न तरिकाले एक राउण्डमा भएन भने अर्को राउण्ड, अर्को राउण्डमा भएन भने अर्को राउण्डमा कुरा गरिरहनु पर्ने हुन्छ । मलाइ खुशी लागेको छ– अहिले भन्दा तीन वर्षअगाडि नेपाल–भारत सम्बन्ध तनावग्रस्त स्थितिमा थियो । त्यो नाकाबन्दीको स्थिति थियो । म प्रधानमन्त्री हुँदा नाकाबन्दी थियो । नाकाबन्दीको अवस्थाबाट आज कमसेकम नाकाबन्दी नहुने मात्रै होइन, अर्को स्थितिमा आइपुगेका छौँ । जायज ढंगले बोलेका कुराहरू, अर्थपूर्ण ढंगले बोलिएका कुराहरूलाई अर्थपूर्ण ढंगले नै लिनुपर्छ हामीहरूले । हामीले भन्दै आयौँ हामी सबैसँग सम्बन्ध राख्न स्वतन्त्र छौँ । हामी हाम्रा छिमेकीहरूसँग राष्ट्रिय लाभ,राष्ट्रिय हितका लागि सन्तुलित सम्बन्ध कायम गछौँ, सबैतिर सम्बन्ध कायम गछौँ ।
एकातिर कोल्टिने होइन । केही समय अगाडि कूटनीतिक मिसनहरूलाई ब्रिफिङ गरिरहँदा मैले भनेको थिएँ – हाम्रो दुश्मनी कसैसँग छैन, मित्रता सबैसँग छ । हामी दुश्मनी कसैसँग चाहदैनौँ, मित्रता सबैसँग चाहन्छौँ । हाम्रो नीति त्यो हो । हामी मित्रता चाहन्छौँ, पारस्परिक साथ–सहयोग चाहन्छौँ र कसैसँग पनि शत्रुता चाहदैनौँ । हाम्रो आकांक्षा कसैसँग वैरभावको होइन, शत्रुताको होइन, तनावको होइन, सम्बन्धमा हामी तीक्तता चाहदैनौँ । तर यथार्थ के हो भने तीन वर्ष अगाडिको सम्बन्ध तनावयुक्त थियो । त्यसकारण म प्रधानमन्त्री हुँदा नाकाबन्दी नखोलीकन जान्न भनेर बोल्नु पर्‍यो, बोलेको थिएँ । नाकाबन्दी खोलेर भारत गएँ । त्यसपछि सम्बन्ध सुधारको एउटा नयाँ आयाम फेरि शुरु भयो । हामीले लगातार भन्दै आयौँ – सम्बन्ध बराबरीको आधारमा, बराबरीको हैसियतमा हुन्छ, दुई ओटा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्रका हैसियतमा हुन्छ । हामी हाम्रा आवश्यकता र हाम्रा प्राथामिकताका आधारमा सम्बन्ध राख्छौँ र व्यवहार गछौँ ।
हाम्रोमा मोदीलाई स्वागत नै गर्न हुँदैनथ्यो भन्ने, सम्बन्ध सुधार गर्नै हुँदैनथ्यो भन्ने पनि कतैकतै देखियो । सम्बन्ध सुधार्नु पर्छ तर हामीले हेपाइ सहनु हुँदैन, अनुचित कुरा सहनु हुँदैन, राष्ट्रिय हित छोड्नु हुँदैन, अरूको हितमा काम गरेर आफ्नो हितलाई छोड्ने काम गर्नु हुन्न । न्यायोचित आधारमा, अन्तर्राष्ट्रिय उत्तरदायित्वका साथ राष्ट्रिय हितको रक्षा र सम्बद्र्धन हरेक राष्ट्रले गर्नुपर्छ । हामीले त्यही गर्ने हो । हामीले भनेको पनि त्यही नै हो । विगतमा त्रृटिहरू भएका छन् भने विगतमा मात्रै अल्झिएर बस्ने कि अगाडि बढ्ने ? मैले अगाडि पनि भनेँ, भारतसँगको तीन वर्ष अगाडिको सम्बन्ध तनावपूर्ण थियो । त्यही तनावपूर्ण सम्बन्धलाई यथावत राखिरहने ? दक्षिण र उत्तर कोरियाका बीचमा त्यति धेरै तनावहरू थिए । तनावहरूकै बीचमा उहाँहरूले वार्ता गर्नुभयो, एकअर्कालाई स्वागत गर्नु भयो । ट्रम्प र वन केही दिनपछि सिंगापुरमा भेट्दै हुनुहुन्छ ।
चीन र भारतका कार्यकारी प्रमुखका बीचमा, मोदीजी र सि जिङपिङका बीचमा तीन राउण्ड व्यक्ति–व्यक्तिका बीच, तीन राउण्ड आआफ्ना टीमसहित वार्ता भएका छन् । अर्थात सम्बन्धहरू बिग्रिनु नराम्रो हो तर दुर्भाग्य यदाकदा विभिन्न कारणले सम्बन्धमा तलमाथि परिदिन्छ । चीसोपन आइदिन्छ । चीसोपनमा खुशी हुने होइन हामीले । ती चीसापनहरूलाई हटाउने कोशिश गर्नुपर्दछ । त्यसबेला पनि मैले व्यतिगत तवरमा भनेको थिएँ – हामी सम्बन्ध बिग्रिएकोमा खुशी छैनौँ, दुःखी छौँ । बिग्रिएको हाम्रो कारणले छैन, हामी बिग्रिने कारणहरू हटाउन चाहन्छौँ । सम्बन्ध सुधार्ने बाटो लिन चाहन्छौ । त्यो बाटोतर्फ फर्काउन चाहन्छौँ । त्यसमा हामी सफल भयौँ । म नेपाली जनताप्रति धन्यवाद भनिरहेको छु , आभार व्यक्त गरिरहेको छु कि जनताकै देशभक्तिका कारण, राष्ट्रियताप्रतिको अडानका कारण बिग्रिएको सम्बन्धमा समझदारीको विकास गर्दै, सुसम्बन्धको दिशामा अगाडि बढ्ने क्रममा हामीले स्वाभिमानपूर्वक यस बिन्दुमा ल्याइपुर्‍याएका छौँ ।
नेपाल एउटा आफ्नै प्रकारको इतिहासको क्रमबाट गुज्रिएर आएको छ । हाम्रो देशको स्वाधीनता, हाम्रो देशको स्वाभिमान, हाम्रै सावधानी र सचेत प्रयासको उपज हो । यो नेपालको सजगता, स्वाभिमान र राष्ट्रिय भावनाको साझा प्रयासको उपज हो । त्यसलाई मैले बुझेको छु । त्यसकारण म प्रधानमन्त्रीको हैसियतले देशको शिर निहुरिन दिने, देशलाई नोक्सान पर्न दिने काम गर्ने छैन । देश यतिधेरै व्यापार घाटामा छ, यसै कमजोर छ, यसै पछाडि परेको छ, यसै आकारमा सानो छ, जनसंख्यामा सानो छ, विकासमा पछाडि छ, हेपिने सम्भावना हुन्छ । यस देशको हावामा सास फेरेको, यस देशको पानी पिएको र यस देशको अन्न पानीबाट हुर्किएको, यस देशको एउटा सन्तानको हैसियतले देशलाई नोक्सान पार्ने कुराहरू मबाट हुन सक्दैनन् । त्यसकारण म माननीय सदस्यज्यूहरूलाई आस्वस्त रहन आग्रह गर्न चाहन्छु – यस पटक मेरो निमन्त्रणामा भारतका प्रधानमन्त्री मोदीजीको नेपाल भ्रमण उपलब्धिपूर्ण भएको छ, नेपालको पक्षमा भएको छ । यसको अर्थ फेरि भारतको विपक्षमा भएको छ भन्ने होइन ।
भारतको समेत पक्षमा भएको छ । दुई देशको लाभको पक्षमा भएको छ, दुई देशको स्वाभिमानको पक्षमा भएको छ । यसलाई हामीले अगाडि बढाउनु पर्छ । अझै कामहरू गर्न बाँकी छन्, तिनलाई अगाडि बढाउनु पर्छ । इपीजी क्रियाशिल छ । हामी विभिन्न चरणमा विभिन्न ढंगले मन्त्रालयस्तरमा वार्ताहरू गरिरहेका छौँ । यसलाई अगाडि बढाउनु जरुरी छ । अब हामीले हाम्रा छिमेकीहरूसँग, दुबै छिमेकीसँग सुमधुर र सुदृढ, पारस्परिक विश्वास र भरपर्दो सम्बन्ध कायम गछौँ । यसपछि भरसक छिटै म चीन भ्रमणमा पनि जानेछु । यसको अर्थ हामी दुई ओटा छिमेकमै मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई सीमित गछौँ भन्ने पनि होइन । विश्वसम्बन्धका सन्दर्भमा आजको जमानामा हाम्रो जस्तो देश, साह्रै साना छौँ भनेर हीनग्रन्थी पालेर बस्नुपर्ने अवस्था छैन । हामीले असाधारण उपलब्धिहरू हासिल गरेका छौँ । यस बीचमा हामीले जस्ता परिस्थितिको सामना गर्‍यौँ, त्यस परिस्थितिमा जुन असाधारण उपलब्धि हासिल गरेका छौँ, ती उपलब्धिका आधारमा अब हामी जता जान खोजेका छौँ, जुन बाटो हिँड्न खोजेका छौँ, हामी दुनियासँग हिस्सेदारी पनि गछौँ, मद्दत पनि लिन्छौँ, सहकार्य पनि गछौँ र अगाडि बढ्छौँ । हामी विश्वशान्तिको पक्षमा, निशस्त्रीकरणको पक्षमा, समृद्धिको पक्षमा छौँ, विकासको पक्षमा छौँ, तनाव होइन वार्ताको पक्षमा छौँ ।
हाम्रा नीतिहरू स्पष्ट छन् । यसकारण हाम्रो छिमेक सम्बन्धलाई पनि हामी प्राथमिकताका साथ,सन्तुलित ढंगले, पारस्परिक लाभ र सम्मानका आधारमा अगाडि बढाउँदै छौँ । अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशलाई पनि हामी त्यसैगरी जिम्मेवारीपूर्ण ढंगले अगाडि बढाउँछौँ । सभामुख महोदय, यस भ्रमणको सम्बन्धमा अहिले मैले सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउने विषयहरू यति नै हुन् । धन्यवाद !
(प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ३० वैसाखमा संघीय संसदमा गर्नुभएको सम्बोधनकोको पूर्ण पाठ)